Global Voices teny Malagasy » Translator Newsletter: Fampianarana fiteny roa, Webinars maimaim-poana, sy tantara hafa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Translator Newsletter: Fampianarana fiteny roa, Webinars maimaim-poana, sy tantara hafa!
Voadika ny 03 Jolay 2019 7:44 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Miranah
Tongasoa eto amin'ity fizarana Taratasim-baovaon'ny mpandika teny ity indray! Androany isika dia hiresaka momba ny…..
Fampianarana fiteny roa
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.npr.org
Vao haingana ny NPR no nanadihady ny fomba itondran'i Etazonia ny fampianarana tamin'ireo mpianatra teo amin'ny 5 tapitrisa eo ho eo izay tsy fitenin-drazan'izy ireo ny teny anglisy. Tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Tombontsoa 6 mety ho azon'ny atidoha amin'ny fampianarana fiteny roa” , miresaka momba ny fiantraikan'ny fandaharam-pianarana fiteny roa sy amin'ny fomba roa eny amin'ny sekolim-panjakana amin'ny zavatra toy ny famindram-po, famakiana teny, fifantohana, ny fahombiazan'ny sekoly sy ny firotsahana ary ny fahasamihafana sy ny fampiatiana i Anya Kamenetz. Jereo ary lazao anay izay eritreritrareo – manana fandaharam-pianarana toy izany ve ianao any amin'ny sekolinanreo eo an-toerana?
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.proz.com/
Manomboka amin'ny 8 Desambra (amin'ity Alakamisy ity!), hanome andiana webinars maimaim-poana (!) ny ProZ. Maro no hiresaka momba ny fomba hihaonana amin'ny mpanjifa ao amin'ny sehatry ny ProZ ary ny hafa miresaka momba ny fampiasana fitaovana CAT [milina fandikan-teny] isan-karazany. Jereo ato  ny lisitra raha hijery hoe misy mahasoa anao amin'ny maha-mpandika teny mahaleotena anao ve!
Fandikan-teny vs. famangitana
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://blog.commlabindia.com/
Rentsika foana ireo teny roa ireo rehefa miasa amin'ny tetikasa fandikan-teny. Ny ankamaroan'ny olona dia mahafantatra fa samihafa kely izy ireo, fa ny mpanjifa kosa matetika mampifangaro azy ireo. Indraja Athluri nametraka ity fanazavana an-tsary mahafinaritra ity  mba hampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandikan-teny sy ny famangitana izay azonao zaraina amin'ny mpanjifa sy ny namana mpandika teny hafa!
Mitady ny mpanjifa voalohany ho an'ny fandikan-teninao
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.thoughtsontranslation.com/
Namoaka lahatsoratra mahafinaritra ahitana hevitra mikasika ny fomba hananganana mpanjifa amin'ny maha mpandika teny vaovao mahaleotena i Corinne McKay, mpandika teny Frantsay-Anglisy malaza izay manolotra fampianarana fandikan-teny malaza amin'ny aterineto. Tsy asa mora ny miditra eo amin'izany sehatra izany sy ny fahazoana ny mpanjifanao voalohany, tsy lazaina intsony ny fitazonana ny fifandraisana amin'izy ireo, izay mety ho iray amin'ireo fanamby sarotra indrindra rehefa manomboka. Inona avy ireo torohevitra azonao avy amin'ny zavatra niainanao manokana? Zarao eto izy ireo!
Toy ny mahazatra, misaotra anareo rehetra noho ny asa mafy ataonareo sy ny fanoloran-tenanareo ho an'ny GV! Raha manana fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra ianao, dia mandefasa mailaka ao amin'ny marianna@globalvoices.org.
Raha sambany mamaky ity taratasim-baovao ianao ary te-hiaraka amin'ny Global Voices dia lazao anay bebe kokoa ato ny momba anao !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/03/140679/
 “Tombontsoa 6 mety ho azon'ny atidoha amin'ny fampianarana fiteny roa”: http://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
 ity fanazavana an-tsary mahafinaritra ity: http://blog.commlabindia.com/elearning-translations/translation-and-localization-differences-infographic
 lazao anay bebe kokoa ato ny momba anao: https://globalvoices.org/lingua/translator-application-form/